Iindlela ezi-7 zokunyusa inkcitho yomThengi kwindawo oThengisa kuyo | Martech Zone
Kwihlabathi lentengiso, isicwangciso konke. Inkcitho ibotshelelwe ngqo kubuchwephesha bokuthengisa kwaye oko kuthetha ukuba abanini bevenkile kufuneka bayile ukuba injongo yabo kukwandisa inkcitho yabathengi. Ngethamsanqa, kukho iindlela ezininzi ezivavanyiweyo kunye namandla okufumana abathengi bakho ukuba bachithe ngaphezulu, kwaye rhoqo-kwaye siza kukuvumela ukuba ungene kwezinye iimfihlo zorhwebo ukuze ufumane ukuba konke okubaluleke kakhulu kwintengiso yakho ivenkile.
Impembelelo yefuthe - Impembelelo yinto enamandla-kwaye ukuba ukuthengisa kwakho ngentengiso kunokuvelisa imeko yongxamiseko, ukuthengisa konke kodwa kuqinisekisiwe. Eyakho Ukuthenga okungxamisekileyo Icandelo-ekufuneka lifunyenwe kwindlela eya kwintengiso-yindawo efanelekileyo yokuthenga izinto ezincinci kunye nezongezelelekileyo ezinikezela ngexabiso elifikelelekayo, lokugqibela kwimizuzu yabo yokuthenga.
Ukuthengisa okungeyonyani -Isiphumo sentengiso yindlela yobudala yokuthengisa eqinisekisiweyo ukuba nefuthe kwintengiso. Ayizukuthengisa kuphela izinto-nokuba yeyiphi na eyehlayo yokwenyani okanye ebonakalayo - ithengise njengamaqebengwana anelungelo elifanelekileyo lokunyusa ixesha kuphela, kodwa kwanoluvo nje lwentengiso lwanele ukuqhuba inkcitho kwiimveliso ezivenkileni ngokubanzi. Intengiso okanye akukho ntengiso.
Inkcubeko yobuninzi -Enye indlela ekrelekrele yokwandisa inkcitho yomthengi kutyelelo lwakho ngalunye kukusebenzisa inkcubeko eninzi. Ngokwazisa iimveliso zakho njengenxalenye yokuqokelelwa kwezinto ezinkulu, ezikhuthazwa njengethuba lokonga imali, abathengi baya kuthi xhaxhe ngeli thuba lokufumana iseti iphela ukuba kukho ukonga kuyo ngokwenza njalo.
Imephu yomda Iimveliso ezikumgangatho ophezulu kufuneka zinikezwe eyona ndawo zibekelwe yona-kwaye ngokuthobela imiyalelo yokuthengisa ngokuthengisa, unokuqiniseka ukuba uza kuvuna izibonelelo zalawo margins. Ukubeka izinto ezikumda ophezulu kufutshane nokungena kwivenkile yakho kuqinisekisa ukuba ziya kuqatshelwa-kwaye zonyuse ithuba lokuba bazalise abathengi bakho 'ngeebhaskithi ezingenanto.
Amandla emizwa -Ukwazisa into eyongezelelweyo kwivenkile yakho yindlela efanelekileyo yokuqhuba ukuthengisa okukhulu. Ukuziva kwabathengi bakho kukunuka kukuziphatha kwabo, kunye neemveliso ezinjengeebhaki kunye neentyatyambo ezisebenzisa amadlala amathe xa zibekwe kufutshane nomnyango. Ukukwazi ukubhenela kwiimvakalelo zabathengi kunika amava akho okuthenga ubungakanani obongezelelweyo-kwaye kubangele ukuthengwa okunyanzelekileyo kube nefuthe elikhulu.
Ukufikelela kuthintelwe Eyona ndlela yokuqinisekisa abathengi bakho ukuba bathenge iimveliso zakho kukuqinisekisa kuqala ukuba bayazibona. Elinye iqhinga lokuthengisa ngentengiso kukugcina izinto ezibalulekileyo zemihla ngemihla ngasemva kwivenkile, ukuqinisekisa ukuba abathengi baya kuhamba kwelinye icala levenkile baye kwelinye ngaphambi kokuba bafumane. Ngale ndlela, abayi kushiya isakhiwo ngaphandle kokujonga uluhlu lwakho.
Umgca wokubona -Imeyile yabathengi bakho yeyona mpembelelo iphambili kwindlela abaziphatha ngayo ekuthengeni- kwaye kufuneka ibe yeyona nto iphambili ekuqwalaseleni ubuchule bokuthengisa. Iimveliso ezinkulu zetikiti kufuneka zibekwe kwiliso, kuqinisekiswe ukuba ziyabonwa ngaphandle kokufuna intengiso ebabazekayo. Awufuni abathengi kufuneka basebenze ukufumana iimveliso zakho-ke thatha amanyathelo afanelekileyo ukuze uqiniseke ukuba ekuphela kwendawo abajonge kuyo kulapho kanye befanele ukuba khona.
Ukuba ulandela imfihlo yokuthengisa, uyifumene. Oku Uluhlu lokujonga olubanzi Ngoyena ndoqo wentengiso yokuthengisa engenanto ingena moya, eqinisekisa ukuba ivenkile yakho yenzelwe imephu yenzuzo- ukushiya ukuba uhlale phantsi uvune izibonelelo.
tags: 4 ii-pinkcubeko eninziimpembeleloumgca wokubonaImephu yomdaMerchandiseukufakwaixabisoimvelisoUkuthengisa okuthintelweyoukuthengisa okuthengisiweyoIcebo lokuthengisaukuthengisa okungeyonyaniamandla emizwaSinso inkxaso yevenkile